सरकार १० अर्ब खोई ? भन्दै नारा लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारद्वार खर्च विवरण सार्वजनिक !
काठमाडौं । सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा १० अर्ब खर्च भएको बताएपछि संसददेखि सडकमा त्यसको हिसाब मागिएपछि सरकारले बाध्य भएर खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन, औषधिउपचार, अस्पता र जनशक्तिको व्यवस्थापन खर्च अनुसार नदेखिए पनि सरकारले ठूलो रकम उक्त शिर्षकमा खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणमा आठ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । उक्त विवरण सरकारको कुनै निकायभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन ।
उक्त खर्च विवरण अनुसार क्वारेन्टाइनका लागि मात्रै १३ करोड ५५ लाख ९८ हजार खर्च गरिएको उल्लेख छ। जबकी हाल क्वारेन्टिनमा बसेकाहरु अधिकांस विद्यालयका बेन्ची जोडेर, खुला चौरमा खाट बिच्छ्याएर, कतिपय गोठ र ओडारमा पनि बसिरहेका तस्बिर सार्वजनिक भइरहेका छन । क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसारका नभएको र सुरक्षित पनि नभएको भन्दै आन्दोलन समेत भइरहेका छन ।
सरकारले औषधि स्वास्थ्य सामग्रीमा ३ अर्ब ९० करोड ८८ लाख खर्च गरेको छ। तर संसदमै सरकारले किनेका पाँचवटा पिसिआर मेसिन र त्यो पनि नचल्ने अवस्थामा भएको भन्दै काँग्रेस सांसद गगन थापाले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । उता जनशक्ति र परीक्षण गर्ने ल्याबको क्षमता नभएको भन्दै सुदूरपश्चिमममा स्वाब संकलन स्थगित गरिएको छ भने देशभर करिब ३० हजार नमुना परीक्षण हुन सकेका छैनन ।
थापाले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधारमा १ अर्ब १२ करोड ५० लाख, जनशक्ति परिचालनमा ५ करोड ८३ लाख ३३ हजार तथा अन्य शीर्षकमा ४० करोड १५ लाख ९ हजार खर्च गरिएको उल्लेख छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ। भने रक्षा मन्त्रालयबाट २ अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार खर्च गरिएको देखाइएको । उक्त विवरण कसले र कुन माध्यमबाट सार्वजनिक हुनुपर्ने हो ? त्यो भने बहसकै विषय हुनसक्छ ।